Ary Raha Any Gabòna Ny Silicon Valley Afrikàna Amin’ny Hoavy No Hitsangana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2016 5:43 GMT
Ny fahitàna an'i Libreville amin'ny alina. Avy amin'i Hugues tao amin'ny FlickR CC-BY-2.0
Nandray ny niomerika i Gabòna. An-dàlana ny ho lasa ivon'ny teknolojiam-pifandraisana sy ny fampahalalàm-baovao (TIC) ara-bakiteny ilay firenena amin'izao fotoana izao. Politikan'ny firotsahana an-tsirapo avy amin'ny fanjakàna no nitondra ho amin'io fahombiazana io, notohanan'ny fandaharanasany fanovàna ara-drafitra ny toekarenam-pirenena nomeny anarana hoe Drafitra Stratejika « Gabòna Misondrotra», izay mikendry ny hanaovana ilay firenena ho tendro filamatra amin'ny resaka tolotra niomerika ao amin'ny faritra. Porofon'ny tsy maha-nofinofy intsony ny fisian'ny Afrika mifandray, izay indrindra, fa efa tena mijoro hita maso any amin'ny firenena sasany.
Tamin'ny 2014, navoakan'ny “Union internationale des télécommunications (UIT)” – Fikambanana Iraisampirenena momba ny Fifandraisandavitra – ny fandaharany ireo firenena afrikàna nivoatra indrindra, araka ny tondrony mikasika ny teknolojian'ny fifandraisana sy ny fampahalalam-baovao (IDI). Tsy nahagaga, manana toerana tsara i Gabòna. Izy irery rahateo no hany firenena avy ao Afrika Afovoany sy Afrika miteny frantsay tafiditra amin'ireo 10 voalohany. Ary dia tsy nisy fitsaharany ny fideràna avy amin'ilay fikambanana nanomboka teo. Tamin'ny fararanon'ny taona 2015, dia i Ali Bongo Ondimba no nandray avy amin'ny tànan'ny Filohan'ny fikambanana UIT ilay loka goavana natao ho an'ny Teknolojian'ny fampahalalam-baovao sy ny Fifandraisana (TIC) miasa ho an'ny Fampandrosoana Maharitra, tany New-York. Sady koa, tsikelikely, lasa fanoitran'ny fisondrotan'i Gabòna ny fivoaran'ireo asa amin'ny sehatrasa fahatelo madinika manana votoaty betsaka momba ny teknolojia, ary ny andry fototry ny fanamaroana ilay toekarena izay nifototra nandritry ny fotoana ela tamin'ny tamberimbidy (solika, hazo tsy fahita firy, mineraly…).
Iray amin'ireo feo niantso sy nanatanteraka ity tetezamita mankamin'ny Gabòna 2.0 ity ny talen'ny kabinetran'ny prezidansa, Maixent Accrombessi. Ny fandalinany ny lasitra toekarena Gaboney no nahafahana nametraka ny fototry ny fanavaozana izay nitondràna ny firenena, tamin'ny fanaovana azy ho ivo ara-bakitein'ny niomerika any amin'ny faritra ka ampitahain'ny sasany sahady amin'ny Silicon Valley afrikàna. Ny fitaovana nianteheran'i Accrombessi nentiny niady ve ? Miady manohitra ny toekarena miankina fotsiny amin'ny tamberimbidin'ny solika, sehatra iray tsy dia mamorona asa firy loatra ary tsy maharitra, satria mifanehatra amin'ny mety ho faharitàna malakin'ireo otrikarena tsy azo havaozina.
Araka izany, nametraka sehatra iray mahasarika i Gabòna, manome vàhana ny fampiasana vola amin'ny niomerika – ary indrindra fa ny “fibre optique” – mba hampivelarana ny fahafahana miditra aterineto haingam-pandeha manerana ny faritry ny firenena. Anatin'ilay Drafitra Gabòna Misondrotra ny fanorenana tambajotranà “fibre optique” mirefy 7 000 km any ho any. Mifanindran-dàlana amin'izay, vola 110 tapitrisa no nampiasain'ny firenena amin'ireo fotodrafitrasa ahafahana manitatra ny tambajotra haingam-pandeha sy hampihenàna ny vidin'ireo tolotra fifandraisana, izay manaraka ny fametrahana lalina ny niomerika ho ao anatin'ny kolontsain'ny toekarena gaboney – ny tahan'ny fidiran'ny aterineto finday ao Gabòna dia 76%. Etsy andaniny, manipika ny bilaogy Alliativ fa Gabòna no firenena voalohany ao Afrika manana ny teknolojia 4G. Niteraka vokatra ireny fepetra ireny : 293 lavitrisa amin'ny farantsa CFA no nateraky ny sehatry ny TIC tamin'ny 2014 ; asa 12 000 no voaforona tamin'io taona io ihany ; fitomboana maharitry ny toekarena gaboney nandritry ny fotoam-pitondrana voalohany nitantanan'i Ali Bongo (+ 5,9% teo anelanelan'ny 2010-2014) izay mifototra amin'ireo fahombiazan'ny sehatra ivelan'ny solika, indrindra fa ireo mpanome tolotra (fitomboana +7,2% ).
Michel Rogy, mpanolotsaina teknika momba ny TIC ao amin'ny ìraka gaboney ao amin'ny Banky Iraisampirenena, dia nankasitraka manokana ity hetsika ity :
Fiaingàna iray tonga lafatra amin'ny tena haingam-pandeha ao Gabòna sy ny politika iray ho an'ny fampandrosoana ny aterineto ary ny toekarena niomerika izay mandray tsara ho anatin'ny kajy ireo singa rehetra tena ilaina mba hahazoana fahombiazana.
Ary mety ho izay no tsiambaratelon'ny fahombiazana gaboney: fomba fijery sady marindrano (fanamoràna ny fidirana amin'ny teknolojia) no mijidina (fanofanana ny tanora). Marobe ihany koa no sady maro karazana ireo ohatra : niaraka tamin'ny Banky Iraisampirenena, ohatra, dia nikarakara ny fampifandraisana ny firenana tamin'ny Central Africa Backbone (CAB) i Gabòna tamin'ny 2012. Ny tambajotra “fibre optique” CAB dia mikendry ny hampifandray ny firenena amin'ilay tariby ACE (Africa Coast to Europe) milevina ambanin'ny ranomasina mampifandray ny morontsiraka andrefan'i afrika amin'i Eoropa, mba hitsinjaràna io tombon'ny hafainganam-pandeha io amin'ny alàlan'ireo”fibres” ety an-tanety. Azo tanisaina ihany koa ilay tetikasa fanorenana vohitra niomerika, natomboka tamin'ny Febroary 2015, (toeram-panorenana goavana misy foibe 2.500 na vohitra nametrahana fotodrafitrasa niomerika manerana ny firenena).
Ny fanambaràna ny andiany faharoa amin'ny Fampirantiana Iraisampirenena momba ny Toekarena Niomerika sy ny Famoronana ao Gabòna, anangonana ireo mpisehatra avy amin'ny fanjakana, ny sehatra tsy miankina, ny fiarahamonina sivily, ireo vondrombahoaka eo an-toerana sy ireo hetsiky ny tanora, amin'ny fandrafetana azy ireny manodidina ireo atrikasa fanofanana ara-teknika avo lenta sy ireo trano heva fampirantiana ny asa famoronana, dia mampiseho ny faniriana hanoratra io fahavitrihana io ho ivon'ny fanabeazana ny andian-taranaka tanora. Amin'io fomba fijery io, azo tanisaina ihany koa ny tetikasa « Ofano ny Taranako », natomboka tamin'ny volana May niarahana tamin'ny UNESCO sy ny mpandraharaha amin'ny telefona finday AIRTEL GABON, izay mikendry ny hanofana tanora 5 000 eo anelanelan'ny 17 sy 35 taona mandritry ny telo taona amin'ny sehatry ny TIC. Fandraisana andraikitra maro mitodika amin'ny vazantany rehetra izay mampiseho fa irian'i Gabòna ny hanafaingana ny hazakazaka ataony ho any amin'ny fandrosoana, no sady fandraisana andraikitra mitondra antsika hisaina fa mety ho afaka tsara hipetraka ho toy ny Silicon Valley amin'ny endriny afrikàna izy rahampitso.